INetflix inyusa intengo yamanani ayo anyanga zonke | Izindaba zamagajethi
INetflix inyusa intengo yamanani ayo anyanga zonke
Kwakunamahemuhemu ezinyangeni ezimbalwa ezedlule: INetflix ingakhuphula amanani ayo. Futhi kuye kwaba njalo. Ngemuva kwalokhu, amakhasimende amasha azoba namanani aphezulu ngamazinga alo amabili amathathu akhona; Amakhasimende wamanje azoba nesikhathi esithe xaxa sokujabulela isilinganiso sawo samanje.
Ngakho-ke, sizoqhubeka nokuba namazinga amathathu esingakhetha kuwo: Eyisisekelo, Ejwayelekile kanye nePrimiyamu. Ababili bokugcina yibo bathola ushintsho lwesilinganiso futhi bakhuphuka i-1 ne-2 euro, ngokulandelana. Ngendlela efanayo, ake sibuyekeze konke okunikezwa izindlela ezintathu.
La isilinganiso esiyisisekelo sizoqhubeka sibize ama-euro ayi-7,99 ngenyanga. Kule ntengo sizoba nethuba lokujabulela womabili ama-movie nochungechunge ngekhwalithi ye-SD (ukulungiswa okuphansi). Futhi, lesi silinganiso sikuvumela kuphela ukubuka konke okuqukethwe kusikrini esisodwa.
Endaweni yesibili sinomunye wabaphikisi bale ndaba: Izinga elijwayelekile. Lokhu intengo yayo inyuka nge-euro eyodwa futhi ime kuma-euro ayi-10,99 (ngaphambilini kwakungu-9,99 euros). Kule nketho, ikhwalithi yokuqukethwe ingajatshulelwa ngokulungiswa kwe-HD futhi kungahle kube nezikrini ezi-2 ngasikhathi sinye esingazisebenzisa.
Ekugcineni kunesilinganiso sePrimiyamu. Le nketho imali yakho yenyanga inyuka ngama-euro amabili bese uyibeka kuma-euro angu-13,99 (ngaphambilini kwakungu-11,99 euros). Leli zinga, elinye lamakhasimende adumile kakhulu okwabelana ngama-akhawunti, likuvumela ukuthi uthokozele ama-movie nochungechunge kuzimpawu ze-HD nezingu-4K, futhi ukwazi nokubuka kuzikrini ze-4 ngasikhathi sinye.
Ngokuqondene namakhasimende amasha, le ntengo yiyona yamanje. Kodwa-ke, ngokusho kwekhasi likaNetflix uqobo, amanani azosebenza kumakhasimende amanje ngemuva kwe- ngoNovemba 4 olandelayo lonyaka. NgoJulayi odlule, iNetflix yahlola lezi zintengo ezintsha kwabanye abasebenzisi baseJalimane. Futhi kubonakala sengathi ekugcineni iSpain izoba ngomunye olandelayo ukubuyekeza ikhathalogi yayo ye-quota. Manje, obekungalindelekile ukuthi isilinganiso esiyisisekelo sizohlala sinjalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » INetflix inyusa intengo yamanani ayo anyanga zonke
USergio Soria Olivares kusho
U-Esther González Macías
Phendula uSergio Soria Olivares
U-Esther González Macías kusho
Angazi ukuthi uzama ukungitshela ini?
Phendula u-Esther González Macías
I-Wiko View Prime iphakanyiswa njengenye indlela ebiza izindleko yesikrini sonke